China Cantilever ogbe rụpụta na Factory | Huade
N'ụzọ zuru ezu akpaghị aka Nchekwa System
Ọkara akpaghị aka Nchekwa System
Suttle Racking Sistemụ
Shuttle Carrier Sistem
Ogwe osisi cantilever dị mfe ịwụnye ma gbanwee maka ịchekwa ogologo, ibu na oke ibu dị ka osisi, ọkpọkọ, trusses, plywoods na na. Ogwe osisi cantilever nwere kọlụm, isi, ogwe aka na nkwado.
Ogwe osisi cantilever dị mfe ịwụnye ma gbanwee maka ịchekwa ogologo, ibu na oke ibu dị ka osisi, ọkpọkọ, trusses, plywoods na na. Ogwe osisi cantilever nwere kọlụm, isi, ogwe aka na nkwado. Dị maka otu akụkụ ma ọ bụ akụkụ abụọ.Cantilever ogbe nwere ike ịbụ atọ ụdị: ìhè ọrụ ụdị, ọkara ọrụ ụdị na oké ọrụ ụdị.
Mfe iji, ihu na-emeghe n'enweghị ogidi, na-enye ohere ibudata ngwa ngwa na ibudata ngwa ngwa. Akụrụngwa na-echekwa ma dozie ya na ogwe aka n'akụkụ forklifts ma ọ bụ cranes stacker, nke nwere ike belata ọrụ metụtara metụtara ịnyefe ụgwọ.
Ego. Nke ahụ bụ ịhọrọ echekwa.
Mgbanwe, Ọ dịghị mmezi ogidi, loading nwere ike enịm dum ogologo nke a cantilevel ogbe shelf.
Nhọrọ, a na-amata oghere oghere ozugbo.
Na-eme mgbanwe, cantilever rack nwere ike ịchekwa ụdị ibu ọ bụla. Nke a na-azọpụta oge na ụgwọ ọrụ.
Akpụkpọ anụ cantilever nwere akụkụ anọ
Isi, na-akwado ndị ziri ezi na ogwe aka nke ibu ahụ dị na ya. Ekpuchiri isi ala na ala ma ọ bụ ala ala.
Eziokwu, jikọọ n'ime isi iji kwado ogwe aka; ogwe aka nwere ike gbanwee na ziri ezi.
Ogwe aka, gbatịpụ site na ndị ziri ezi na-ejide ibu echekwara, ha nwere ike kwụ ọtọ ma ọ bụ dị elu n'akụkụ dị iche iche dị ka ihe achọrọ ngwaahịa si echekwa.
Kwụ / X nkwado, jikọọ ihe ngosi, na-enye nkwụsi ike, isiike na ike.
Cantilever racking nwere ike kpọkọta na ọtụtụ iche ụlọ nkwakọba ihe, ọtụtụ ndị megide a mgbidi maka otu akụkụ na azụ azụ maka abụọ n'akụkụ. Enwere ike ịgbanwe oghere dị n'etiti ihe kwesịrị ekwesị ka ọ daba n'akụkụ ọ bụla n'ụlọ nkwakọba ihe gị iji mee ka ohere niile dị.
Huade Cantilever Rack, nhọrọ kachasị mma gị.
Nke gara aga: Sistemụ ngwongwo pallet
Osote: Akwa Carton Flow Rack
Gbọala Na Akpa
Nanjing Huade Nchekwa Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Ekwentị: +86 13218098210